ရေနံချောင်းကအံဖွယ်ထူးဆန်းဖြစ်ရပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Relationships & Family » ရေနံချောင်းကအံဖွယ်ထူးဆန်းဖြစ်ရပ်
Posted by thihayarzar on Aug 1, 2010 in Relationships & Family | 32 comments
ဒီသတင်းကို ရေနံချောင်းကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောပြခဲ့တာပါ။ သူပြောတော့ယုံတောင်မယုံဘူး။ အဖြစ်အပျက်ကတော်တော်ဆိုးတယ်။ အစကတော့ ဒီမှာမတင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာ။ အခုမနေနိုင်လို့တင်မိတာပါ။ ဒီမှာတင်ရတဲ့အကြောင်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ဖို့၊ လူကြီးများလည်း ကိုယ့်သားသမီး ကိုယ်မောင်နှမ များကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့နေစေချင်လို့ပါ။ ဖြစ်ပုံက (၇)လပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ရေနံချောင်းဒီဂရီကောလိပ်မှာ ကျောင်းတက်ရင်း အဆောင်နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။ အဆောင်နာမည်တော့ ထည့်မပြောတော့ဘူး။ ကောင်မလေး (၄) ယောက်က မိန်းကလေးစိတ်နည်းနည်းပေါက်နေတဲ့ ကောင်လေးကို အခန်းထဲမှာစိတ်ကြွဆေးတွေတိုက်ပြီး အတင်းအဓ္ဓမ အလိုမတူပဲ ………… ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကောင်လေးကို နှစ်ရက်လောက်အခန်းထဲမှာထားတယ်။ နောက်တော့ ကောင်လေးကအခြေအနေဆိုးလာတယ်။ သူတို့လည်း မတက်နိုင်တော့ဘူး ကောင်လေးကိုဆေးရုံသို့ပို့လိုက်ကြတယ်။ ဆေးရုံရောက်ပြီး သိပ်မကြာပါဘူး။ ကောင်လေးကသေဆုံးသွားပါတယ်။ ကောင်လေးသေဆုံးတော့ ကောင်မလေးတွေကိုလည်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ အဲဒီဘက်မှာတော့သတင်းကတော်တော်ပြန့်နှံနေပါတယ်။ အခုကျွန်တော်လည်းအားလုံးသိအောင် မတင်ချင်တင်ချင်နဲ့ပဲတင်မိတာပါ။ ကောင်မလေးတွေရဲ့မိဘတွေများ ဘယ်လောက်ရှက်လိုက်မလဲမသိဘူးနော်။ ဒီသတင်းကိုဖတ်ပြီးတော့အားလုံးလည်း ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း နေစေချင်လို့ပါ။ ကောင်မလေးတွင်မဟုတ်ဘဲ ကောင်လေးတွေလည်း ဂရုစိုက်စေချင်လို့ပါ….
အမ် မိန်းမတွေက…. ယောက်ကျားလေးကို…. ပာုတ်လား
ဟုတ်ရော ဟုတ်ရဲ့လားဗျာ…… ကြားရတာ နားဝမှာ မသက်သာလိုက်တာ…
ကောင်လေးက သေသွားတော့ ဘာမှ မခံစားရတော့ဘူး။
ကောင်မလေးတွေက မသေတော့ အရှက်ကွဲပြီး မိန်းမဈေး ထိုးကျသွားတယ်။
ကောင်မလေးတွေဘက်က စဉ်းစားကြည့်ရင် သေရတာထက်တောင် ပိုပြီး အရှက်ကွဲသေးတယ်။
သူတို့အဖေအမေတွေတော့ မျက်နှာ ဓားနဲ့စင်းပစ်ခြင်ကြမှာ အမှန်ပဲ။
ထောင်ကထွက်ရင် ကောင်မလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ဟာ မကောင်းတဲ့လမ်းကို ဦးမထိုးသွားပါစေနဲ့လို့ပဲ ဆုတောင်းပါတယ်။
စိတ်မနှံတဲ့ကောင်လေးအတွက်ကတော့ စောစောစီးစီး အိပ်သွားတာ တစ်မျိုးကောင်းပါတယ်။
တကယ်လား ဟင် သတင်း အမှား ကြီးထင်ပါတယ် ….တကယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့လို့ အကျင့်ခံ ခြင်းလိုက်တာ ဟိဟိ……
သတင်းကြီးကလည်း ဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူး။ ဒါမျိုးက သေနိုင်လို့လား မိန်းမတွေကသာ သေနိုင်တယ် ဆိုတာ ကြားဘူးတာ ယောကျားလည်း သေနိုင်လို့လား။ သိတော့ဘူး။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေကော ဟုတ်ရဲက လားဟယ်
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေကော ဟုတ်ရဲ လားဟယ်
ကျွန်တော် အမြင်အရဆိုရင် လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံက ကောင်မလေးတွေ အဲလောက်မရဲတာတော့ သေချာတယ်။ အဲဒီအခြောက်ကို ခေါ်ပြီး ဟိုုဟာကိုင် ဒါကိုင်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆက်ဆံပြီး ဟိုကောင်သေသွားတယ် ဆိုတာကြီးက အရမ်း ပိုတယ်လို့ထင်တာဘဲ။ နောက် ဆေးက ၂ ရက်လောက်ထိ ကောင်းလား။ ဒီလိုဆို အဲဒီ ဆေးလေးတောင် နာမယ်မေးရအုံးမယ်။ ဟီးဟီး… ။
မြန်မာပြည်က မိန်းကလေးများအဲဒီလောက်တော့ အောက်တန်းမကျဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
လူဆိုတာကတော့ပြောမရဘူး ဦးပေါက်ရဲ ့
ဆိတ်ကွယ်ရာလို ့ထင်ပြီး ဒါမျိူးလုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ
တစ်ကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ အရှက်မရှိတဲ့ မိန်းမ xxx ပေါက်တွေကိုပဲအပြစ်တင်ရမယ် ။ သူ့ဘာသာသူခြောက်နေတဲ့ကောင်လေးကို အေးဆေးနေပါစေလား ။
သူတို့တကယ်သတ္တိရှိရင် …. ခြောက်နေတဲ့ကောင်လေးကိုမလုပ်ပဲ ယောကျာင်္းစိတ်တကယ်ရှိတယ် ကောင်ကိုခေါ်ကြည့်ပါလား ။ ငါးပါးမှောက်သွားမယ် ။
ကြားလို့မှကောင်းသေးရဲ့လား။ မိဘတွေ သားသမီးတွေကို ဘယ်လိုထိန်းတာလဲ ။ ဗရန်းဗတာနဲ့ ။
သတင်းက ဟုတ်ကောဟုတ်ပါ့မလား … မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးက အဲ့လောက်ရဲတင်းလား ..
ဟုတ်တယ်ဆိုရင်လည်း ပိုများပိုနေမလားလို့ … တကယ့်ကိုအဲ့လိုပါဆိုရင်တော့လေ သူတို့ တော်တော်ကို စိတ်ရူးထနေတာပဲနေမယ် .. ဒါမျိုးက မိဘဆုံးမလည်းရမှာမဟုတ်ဘူး…
ဒါမျိုးက ဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ ခက်လွန်းပါတယ် လုပ်ကြံတာနေမှာပါ
၁။ စိတ်ကြွဆေး ဆိုတာ ဘယ်အမျိုးအစားလဲ။
၂။ ၂ ရက်တောင်ကြာသွားတာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင် ကမသိဘူးလား
၃။ ဘယ်လိုခြောက်တယ်ပြောပြော ယောကျင်္ား အား နဲ့မဖယ်ရင်တောင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို အသံပြုလို ့မရခဲ့လို ့လား
၄။ မြန်မာပြည်က မိန်းကလေး တွေအနေ နဲ ့ဒီလို ကြံစည် ရလောက်အောင် ကောင်လေးက ဆွဲဆောင်မှုရှိနေခဲ့လို ့လား
ဘာပဲပြောပြော ယုံရခက်ကြီးပါ ကျွန်တော်တော့ သိပ်မယုံချင်ဘူး
ဒါဆို မြန်မာမိန်းကလေးတွေအတွက် သီးသန့် အနှိပ်ခန်းလေးတွေဖွင့်ပေးရမယ်ထင်ပါ့…
ဒါမှလည်း ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးရမှာပေါ့..
ဒီလို ၃-၄ယောက် စိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်ဖို့ ဒီကိစ္စမှာခဲယဉ်းပါတယ်…
မိန်းကလေးဆောင်ထဲကိုလဲ ယောက်ကျားလေးဝင်ခွင့် မှမရှိတာကိုလဲ
အဲဒါဆိုရင်သူတို 4ယောက်က ဘာပုတ်မတပ်ရမလဲ
376လား အင်းအဲဒါက one by one မှထင်တယ်နော်
ကောင်လေးက သေသွားတယ်ဆိုတာ ဘာကြောင့်နဲ့ သေသွားတာလဲ? အားပြတ်သွားလို့လား? ဆေးလွန်သွားလို့လား?
ဆေးအရှိန်မပြေတာကတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြေလာရင် လေးယောက်ဝိုင်းချုပ်ပြီ ထပ်တိုက်လို့လဲ ရတာပဲ။
နှစ်ရက်လောက် အခန်းထဲမှာ ထားပြီး ဆန္ဒဖြည့်တယ် ဆိုတာလဲ ဖြစ်တော့ ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ (သူတို့က လေးယောက်လေ)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီထက်ပိုသေချာအောင် စုံစမ်းလို့ရရင် ကောင်းမယ်။
a that 1oo ma nay ya pae maeamhu 100 tway ya tel so tae saying kaayam mhan tar pae
လောကကြီးမှာ ကျွန်တော် သိပ်နားမလည်တာတွေရှိသေးတယ်ဗျ
သူက ဘာလို့ သေတာလဲ ပင်ပန်းလွန်းလို့ လား စိတ်တင်းထားရလို့ လား မိန်းမစိတ်ပေါက်နေတဲ့ သူကို ဘာလို့ ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ လုပ်ချင်းလုပ် ယောကျင်္ားစစ်စစ်သာခေါ်ပါလား အရှက်ကွဲ ရကျိုးမနပ်လိုက်တာ
မဟုတ်နိုင်လောက်ပါဘူး….ကောလဟာလပဲနဲ့တူတယ်….အဆောင်မှာက သူတို့လေးယောက်တည်း နေတာမှဟုတ်တာ….ပြီးတော့….စိတ်ကြွဆေးက နှစ်ရက်တောင်ခံလား…..ကောင်လေးကရော ဒီအတိုင်း ငြိမ်နေမှာလား….
ရေနံချောင်းက ဖေကံကောင်း တို. လက်နှေးတော. မိန်းကလေးတွေက အင်းအားသုံးပြီး နတ်ကတော်ကို လှော်လိုက်တာနေမှာပါ ဒီသတင်းမျိုး မြောင်းမြ မှာတစ်ခါကြားဘူးပါတယ် လွန်ခဲ.တဲ.5နှစ် လောက်က 9တန်း ကျောင်းသားလေး ကို ကုန်စိမ်း ရောင်းတဲ.မိန်းမ 3ယောက်ကလှော်တာဆိုပဲ ကောင်လေး ဆေးရုံတော.ရောက်တယ် သေတာတော. မကြားမိဘူး မြောင်းမြ သားတွေ ကနည်းနည်း အကြောမာတယ် ထင်တယ် ဒီကစ္စနဲ. ပါတ်သတ်ရင်ပေါ့
ဆေးရုံရောက်တာ အကြောက်လွန်လို့နေမှာပေါ့။ ဘယ်လိုတွေးတွေး လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး
မဖြစ်နိုင်ဘူးလို.ပဲ ထင်ပါတယ်… မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံပါ။ မိန်းကလေးတွေ ဘယ်လောက်ပဲအရှက်မဲ့မဲ့ ဒီလောက်ထိလုပ်ဖို.လို.တော့ ခဲယဉ်းပါတယ်။
ပြီးတော့… တစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ပဲ ၃-၄ ယောက်လောက် ပြိုင်တူအရှက်မဲ့ဖို.ဆိုတာကလဲ လက်ခံဖို. ပိုခဲယဉ်းပါတယ်…
အဲ့ဒီကောင်လေးက အဲ့ထဲကကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ရည်းစားတဲ့ ။ ။ ဂလဲ့စားချေတယ်ဆိုလားပဲ ။ ကောင်လေးရဲ့မိဘတွေက ကောင်မလေးတွေကို တရားစွဲထားတယ်တဲ့ ။ အဲ့ထဲက ကောင်မလေးတစ်ယောက် နဲ့သူ့မိဘ တွေက တော့ ပျောက်နေလို့ လိုက်ရှာနေတယ်လို့ ပြောတယ်. . .